सेक्स कति पटक र कुन समयमा गर्ने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सेक्स कति पटक र कुन समयमा गर्ने ?
महिला तथा पुरुष दुवैको जीवनमा सहवासको निकै महत्त्व छ । धेरै मानिसको मनमा शारीरिक सम्बन्ध कुन समयमा र कति पटकसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ । तर, यो विषयमा मानिस खुलेर कुरा गर्दैनन् । एक रातमा कति पटकसम्म शारीरिक सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषय सम्बन्धित दम्पतीमा निर्भर हुने गर्छ । जोकोहीको स्वास्थ्य एकै किसिमको हुँदैन । कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुन्छ त कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्य त्यति तन्दुरुस्त हुँदैन । त्यसैले सेक्स कति पटक र कुन समयमा गर्ने सम्बन्धी केही जानकारी यस प्रकार छ :
सेक्स कति पटक गर्ने ?
सेक्स कति पटक गर्ने भन्ने लेखाजोखा त छैन । आवश्यकता अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । तर, भनिन्छ धेरै खायो भने चिनी पनि तितो हुन्छ । उपयुक्त समयमा र आफ्नो पार्टनरको मुड हरेर सेक्स गर्न सकिन्छ । त्यसैले एक सातामा तीन पटक सेक्स गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । बिहानमा सेक्स गर्दा महिला र पुरुष दुबैमा प्रजनन क्षमता पनि बढ्छ । एक अनुसन्धानका अनुसार बिहानमा सेक्स गर्दा महिलाहरूलाई धेरै शक्ति प्राप्त भएको महसुस हुन्छ ।
समय छ र पार्टनर टेन्सनमा छैन भने बिहानमै सेक्स गर्दा रमाइलो हुने विभिन्न अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बिहानको समयमा सेक्सको साथसाथै पार्टनरसँगै बाथरुममा ‘शावर’मा नुहाउँदै मजा लिन पनि सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसो गर्दा आफ्नो पार्टनरसँग अझै बढी आत्मीयता प्राप्त हुनुको साथै रमाइलो पनि हुन्छ ।
बिहानमा सेक्स गर्ने तर रातीमा किन नगर्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ । धेरैजसो जोडिले रातीमा खास गरी खाना खाएर बेडमा जाने र सुत्ने बेला सेक्स गर्छन् । तर, खाना खाएर सेक्स गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु हो । त्यसैले रातीमा सेक्स गनुभन्दा बिहान मै गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । रातीको सेक्समा नयाँपन नहुने पनि बताउने गरिएको छ ।
घण्टौँसम्मको सेक्सभन्दा ३ देखि १३ मिनेटको सेक्समै अधिकतम सन्तुष्टि मिल्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अमेरिकास्थित पेन स्टेट युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले आफ्नो अनुसन्धानबाट उक्त कुरा पुष्टि गरेका हुन् ।
वीर्यको संख्या बढाउन के खाने, के नखाने « Mero LifeStyle
[…] समस्या हुन सक्छ ।छुटाउनु भयो कि ?सेक्स कति पटक र कुन समयमा गर्ने ?यी देशमा यस्ता छन् सेक्स सम्बन्धि […]
ईमेल: [email protected]festyle.com